इस्पातसारीबाट निंबस। MFi नियन्त्रक समीक्षा | आईफोन समाचार
पाब्लो अपारीसियो | | आईफोन सहायक उपकरणहरू
जब हामी अनलाइन स्टोरमा एप्पल टिभी खरीद्छौं भने हामी देख्छौं कि उनीहरूले हामीलाई धेरै सामानहरू प्रदान गर्दछ जुन हाम्रो नयाँ सेट-टप बक्ससँग राम्रोसँग जान्छन्। ती मध्ये एमफाइ रिमोट पनि छ इस्पातसारीहरू निंबस, आईफोन, आईप्याड, म्याक र एप्पल टिभी with को साथ रिमोट कम्प्याटिवल। यो प्रस्तावको साथ, यस्तो देखिन्छ कि एप्पलले हामीलाई भनेको छ कि भिडियो खेलहरूको भविष्यमा एउटा यन्त्र समावेश छ जुन हामीले हाम्रो बैठक कोठामा पाउनेछौं र त्यो उपकरण एप्पल टिभी हुन सक्छ। चौथो पुस्ताको। यो कसरी हुन सक्दछ, अक्टुलिडाड आईफोनमा हामीले यी कन्ट्रोलरहरूमध्ये एउटामा हाम्रो पञ्जा हालेका छौं, यो भनिएको हुनुपर्दछ, यसले हाम्रो मुखमा एक राम्रो स्वाद छोडेको छ। यहाँ तपाईं हाम्रो छ समीक्षा.
1 स्टिलसेरी निम्बस कुन उपकरणसँग उपयुक्त छ?
6 बटन संवेदनशीलता
8 IOS को लागी Nimbus अनुप्रयोग
स्टिलसेरी निम्बस कुन उपकरणसँग उपयुक्त छ?
निम्बस यससँग उपयुक्त छ:
चौथो जेनरेशन आईप्याड वा पछाडि।
आईप्याड मिनी २ वा पछाडि।
आईपड टच generation जेनेरेसन वा पछाडि।
एमएफआई स्टीलसरीज निंबस नियन्त्रक।
द्रुत सुरु मार्गनिर्देशन।
यसमा ब्याट्रि समाप्त नभएसम्म कन्ट्रोलर चार्ज गर्न आवश्यक बिजुलीको केबल समावेश गर्दैन।
स्वीकार्य, डिजाइन अलि अनौंठो छ, कसैले भन्छन् जसले दशकौंसम्म प्लेस्टेशन डुअलशक प्रयोग गर्यो। के सबै भन्दा अचम्मको कुरा हो दुई पक्ष समर्थन गर्दछ, तर यो केहि छ कि, एक पटक हामी यो लिन, काम आउँछ। त्यहाँ डुअलशकको धेरै कम समर्थन छ र, यदि हामीसँग अलि ठूलो हात छ भने, यो प्राय: समर्थन बिना "उडान" भइरहेको छ। बटनहरूको लागि, योसँग कुनै पनि कन्सोल नियन्त्रण जस्तै छ:
दिशात्मक क्रसहेड एउटा हेर्नुहोस्, सबै हेर्नुहोस्। निम्बसमा भएकोले थोरै फरक महसुस गर्दछ, राम्रो, कुनै नराम्रो। यो बानी हुने कुरा हो, यद्यपि यो धेरै आधुनिक खेलहरूमा धेरै प्रयोग भएको छैन।
चार कार्य बटन (A, B, Y र X) तिनीहरू अन्य कमान्डहरूको तुलनामा सँगै छन्, धेरैका लागि राम्रो कुरा हुन्छ तर मलाई लाग्छ यो गल्ती हो। मलाई लाग्छ कि यो बानी हुनुको कुरा पनि हो, तर हामीमध्ये केही ठूलो औंलाहरूले निश्चित रूपले बटन थिच्नेछ जुन हामी एक पटक भन्दा बढि प्रेस गर्न चाहँदैनौं।
L1, L2, R1 र R2। "२" को अवस्थामा हामीसँग क्रमिक ट्रिगरहरू छन्। तिनीहरू मलाई सजिलो लाग्छ, तर मँ कुनै खेलमा प्रयोग गर्न सकेको छैन। हामीले कुर्नुपर्नेछ र शूटरमा प्रयास गर्नुपर्नेछ।
एनालग स्टिकहरू। तिनीहरूको माथिल्लो भाग भित्री भागमा छ, जुन उपयोगी हुन सक्दछ ताकि हाम्रो औंला चिप्लन नहोस्। खराब कुरा के हो भने ती ती अन्तरहरू पूर्ण रूपमा सहज छन् र एकातिर हामीले के जित्यौं हामी अर्कोमा गुमाउन सक्छौं। यदि हामी थोरै (धेरै थोरै) दबाब गर्छौं भने यो राम्रोसँग समातिन्छ।
मेनू बटन, पावर बटन र ब्लुटुथ बटन (यदि यो जोडा मिलाउन आवश्यक छ भने)।
Nimbus राम्रो सामग्री बाट बनेको छ; यो खेलौना नियन्त्रक होइन। उहाँ कमाण्ड भलादमी हुनुहुन्छ। केवल चीज जुन मलाई पूर्ण रूपमा विश्वस्त पार्दैन केही भागहरूको चमक हो। तर हे, हामीले कन्ट्रोलरलाई हेराउनु पर्दैन, यदि स्क्रिनमा छैन भने। सबै भन्दा माथि बटनहरू L र R उनीहरू मलाई धेरै राम्रा देखिन्छन् अन्य नियन्त्रणहरूको तुलनामा र म एनालगसँग उस्तै सोच्छु, यद्यपि तिनीहरू मलाई अलि सानो देखिन्छन्।
सामान्यतया कमाण्डले अधिक दिन्छ गुणको अनुभूति आधिकारिक प्लेस्टेशन कन्ट्रोलरहरू भन्दा, तर यो व्यक्तिगत भावना हुन सक्छ। हामी लिने यस क्षणदेखि हामी त्यस अर्थमा सुखद छक्क पर्छौं, यद्यपि त्यहाँ त्यस्ता कुराहरू छन् जुन हामीलाई अनौंठो महसुस गराउन सक्छ। म मुख्य बटनहरू, क्रसहेड र एनालग बटनहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु, जुन मैले सोच्दछु कि सामान्य हुन्छ जतिखेर हामी घुँडा बदल्छौं। यदि हामी यसलाई लिन्छौं र खेलको लागि हाम्रो हातहरू स्थितिमा राख्छौं, हामी याद गर्छौं कि यो एक हो बलियो घुंडी यो कुनै पनि अन्य प्रसिद्ध कन्सोल कन्ट्रोलरको लायक छ, जबकि गुणवत्ता भुक्तान गरिएको छ।
निंबस, मैले अघि भनें, कमान्ड प्रभु छ। यसमा बटनको संवेदनशीलता समावेश छ। मैले क्लासिक कन्सोलहरू खेल्ने प्रयास गरें (म्याकमा इमुलेटेड) र ज्यामिति युद्ध 3, उदाहरणका लागि, र एनालग धेरै संवेदनशील रूपमा काम गर्दछन्। मैले देख्ने समस्या भनेको उनीहरू अलिक कडा छन्, त्यसैले यदि हामी क्रमिक रूपमा आन्दोलन गर्न चाहन्छौं भने हामीले कमाण्डको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। सबै कुराको लागि, उत्तम।
इस्पातसारीले आश्वासन दिन्छ कि निम्बसको एउटा हुनेछ hours० घण्टा भन्दा बढीको स्वायत्तता (हामी विचार गर्ने छौँ)। त्यो लगभग तीन पटक Dualshock4को दायरा हो, जुन चाँडै नै भनिएको छ। हामी लगातार दुई दिन लगातार खेल्न सक्दछौं निम्बासलाई चार्ज नगरी। चार्ज गर्नको लागि यो बिजुलीको केबलले गरिन्छ जुन बक्समा आउँदैन तर हामी त्यसलाई कुनै आईफोन or वा पछि वा आईप्याड or वा पछिकोबाट प्रयोग गर्न सक्दछौं।
IOS को लागी Nimbus अनुप्रयोग
हाम्रो निंबसको साथ अनुप्रयोग स्टोरमा एक अनुप्रयोग छ। एप्लिकेसनले हामीलाई निंबसको फर्मवेयर अपडेट गर्न मद्दत गर्दछ, ट्यूटोरियलको रूपमा र एप्पल स्टोरमा के खेलहरू उपलब्ध छन् कि MFi नियन्त्रणहरू समर्थन गर्दछ जुन पक्कै राम्रो छ, निश्चित गर्न।
हामी एप्पल स्टोरबाट स्टिलसरीज निंबस किन्न सक्छौं।यहाँ वेब) को लागि को मूल्य 59,95 €। यो कम वा कम मूल्य हो जुन हामी अन्य प्रसिद्ध कन्सोल कन्ट्रोलरहरू किन्न सक्छौं, तर मलाई लाग्छ कि यो आईओएस र म्याक उपकरणहरूमा यसलाई प्रयोग गर्न थोरै उच्च छ। म अस्वीकार गर्दिन कि भविष्यमा यसमा अधिक खेलहरू उपलब्ध छन् र त्यो यसको मूल्य उचित हुनेछ, तर अहिले यो मेरो लागि अलि महँगो देखिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » आईफोन सहायक उपकरणहरू » इस्पातसारीबाट निंबस। एप्पल टिभी to पछि एप्पल द्वारा प्रस्ताव गरिएको एमएफआई नियन्त्रकको समीक्षा
माफ गर्नुहोस् माफ गर्नुहोस् कि तपाईलाई के कुरा गरिरहेको हो थाहा छैन। यो कन्ट्रोलरलाई प्लेस्टेशनसँग तुलना गर्न रोक्नुहोस् जब यो Xbox एकको एक स्पष्ट प्रतिलिपि हुन्छ, जुन जे भए पनि प्ले गर्न उत्तम कन्ट्रोलर हो।
Gery लाई जवाफ दिनुहोस्
डिजाईन लेखकका लागि अनौंठो हुनेछ, जसले कहिल्यै X360 वा XOne मध्ये एक पनि लिने छैन, किनकि त्यहाँ डिजाइनमा चोरी गरिएको छ…।